Isiphaluka seSekethe, iMeko yoBumbano yeSekethe- iDaDa
Ukuvuza kweSekethe yoMhlaba
Iimodyuli eziNgcinci zeSekethe
Indawo eseleyo yokuqhekeza isekethe ngoKhuselo olugqithisileyo
SHANGHAI DADA ELECTRIC CO., LTD yasekwa ngo-2004, yamkelwa njengenye yezona zinto zihloniphekileyo kwilizwe liphela abavelisi abaphantsi beSETYHULA SOKUGQIBELA e-China. Uluhlu olubanzi lweemveliso zigubungela amakhefu esekethe amancinci (i-MCB), intsalela yokuqhekeka kwesekethe yangoku (RCCB), amaBreaker eSekethe ashiyekileyo aKhuselekileyo (RCBO), amatyala esekethe abunjiweyo (i-MCCB), i-AC Contactor, i-thermal overload relay, i-Motor Protection Circuit Breaker njl.
I-CDADA ibonelela ngeemveliso zekhefu yesekethe ephezulu yokuhlola ngokujonga ngokungqongqo umgangatho kuwo onke amanqanaba emveliso.
Ngaphezulu kweminyaka engama-30 yamava e-OEM kunye ne-ODM kubathengi behlabathi abavela kuMbindi Mpuma, eMelika, naseYurophu.
Siyi-100% siqinisekisa amaxabiso okhuphiswano kwiimveliso zethu zesekethe ekumgangatho ophezulu. Abameli bethu abanobuhlobo, abafanelekileyo nabathengi baya kuqinisekisa ngenkonzo ebalaseleyo kulo lonke.
Ukongeza kwinkqubo yethu yokulandela umkhondo ngobuchule, abasebenzi bethu ekulula ukufikelela kubo baqhubeka nokubonelela abathengi ngohlaziyo olukhawulezileyo kwii-odolo.
I-DAB7LN-40 uthotho lwe-DPN yokuSebenza ngoku ...
I-DAM3-160 MCCB Icandelo leSekethe eliBunjiweyo
I-DAM1 Series Umsebenzi oBanzi oSebenzayo obunjiweyo ...